Fomba fampiasana Difenoconazole tsara？
Ny Difenoconazole dia ampiasaina amin'ny famafazana amin'ny hazo fihinam-boa, ary ny famafazana mialoha na amin'ny dingana voalohany amin'ny aretina dia misy ny fisorohana sy ny fifehezana tsara indrindra. ★ Ny sitraka dia miparitaka in-2 isaky ny vanim-potoana fitomboan'ny lohataona, vanim-potoana fitomboan'ny tifitra, tanora ...
Fahombiazana avo lenta, poizina-poizina, fungisida-Difenoconazole spektrum Broad-spectrum
Difenoconazole dia famonoana fungicida be zotram-po, azo antoka, ambany poizina, azo zakan'ny zavamaniry ary misy vokany mahery amin'ny osika. Izy io koa dia vokatra mafana eo amin'ireo fungisida. Amin'ny alàlan'ny fanimbana ny synthesis ny sela rindrin'ny bakteria, dia manelingelina ny ...
Aretina amin'ny voatabia
Tao anatin'ny roa taona lasa, ny ankamaroan'ny tantsaha legioma dia namboly karazan'aretina tsy mahazaka otrikaretina mba hisorohana ny fisian'ny aretina virus tomates. Na izany aza, ity karazana zana-kazo ity dia manana zavatra iraisana, izany hoe tsy mahazaka aretina hafa. Mandritra izany fotoana izany, rehefa mazàna ny mpamboly legioma ...
Mpanamboatra fitomboan'ny zavamaniry DA-6
Diethyl aminoethyl hexanoate (DA-6) dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry marobe miaraka amin'ny asan'ny auxin, gibberellin ary cytokinin. Izy io dia mety levona anaty rano sy solvent solika toy ny étanol, ketone, chloroform, sns.
Ny thiamethoxam vs imidacloprid
Mba hampihenana ny fahasimbana ateraky ny bibikely amin'ny voly dia namokatra bibikely isan-karazany izahay. Mitovy ny fomba fiasan'ny bibikely isan-karazany, koa ahoana no isafidianantsika ireo tena mety amin'ny voly? Androany hiresaka momba ny bibikely famonoana bibikely roa ...